App cusub oo ah "Steam Link" ayaa kuu oggolaanaya inaad ku ciyaartid ciyaaro moobilkaaga Android ama iPhone | War gadget
Ruben gallardo | | Consolas, Mobiles
Wareegtada ciyaarta fiidiyowga ee loo yaqaan 'Steam' waxay soo bandhigi doontaa codsi cusub oo diiradda lagu saarayo taleefannada casriga ah ee noo oggolaanaya inaan ku ciyaarno cinwaannada aan jecel nahay iyadoo loo marayo labada barnaamij ee moobiillada ugu badan: Android iyo iOS. Taasi waa, waad sameyn kartaa Streaming kombiyuutarkaaga ilaa mobiilkaaga isla markaana sii wad ciyaaraha halka aad rabto.
Qalabka fiidiyowga ee 'Steam' duulimaad ma qaadin - waxaan ula jeednaa Mashiinnada Steam -; laga yaabee nasiib wanaag inuu haysto aaladda kale ee madadaalada xilliga firaaqadu iibiso: Isku-xirka bogga, kan u oggolaanaya inuu sameeyo Streaming kombiyuutarkaaga ilaa qolka fadhiga oo aad ku ciyaari karto jawi aad u raaxo badan. Si kastaba ha noqotee, shirkaddu way ka warqabtaa in taleefannada gacanta ee Android iyo IOS labaduba yihiin kacaankii qaybta ciyaarta fiidiyowga. Iyo waxa ugu fiican ee ahaa in sidan loo sharaddeeyo.
Barnaamij cusub oo Steam Link ah ayaa la bilaabayaa (wuxuu ku dhufan doonaa labada dukaan ee appka usbuuca 21-ka May). Waqtigan xaadirka ah waxay la shaqeysay qaar ka mid ah telefishinada Samsung, laakiin waxa xiisaha leh ayaa ah iyadoo laga soo degsado barnaamijkan cusub bartayada aan ku shaqeyno waxaan sii wadi doonnaa ciyaarihii aan ka bilownay PC-ga. Hadda, sida laga wada hadlay, waxaa jiri doona xad.
Si alifaaddu u shaqeyso waa inaad ku xirtaa taada smartphone in PC iyada oo loo marayo shabakad 5 GHz WiFi ama ku xiran router-ka iyada oo loo marayo fiilo iyo dekedda Ethernet; taasi waa, ma awoodi doontid inaad ka dhigto inay u adeegto meel kasta oo aad rabto adigoo isticmaalaya isku xirkaaga 4G - ama 5G mustaqbalka dhow. Sidoo kale, waxaa la cayimay in barnaamijka 'Steam Link app' uu la jaan qaadayo oo kaliya moobilada Android laakiin sidoo kale kiniiniyada iyo TV-ga Android. Dhanka kale, dhanka Apple, waxaad ka ciyaari kartaa cinwaannada aad jeceshahay ee iPhone, iPad iyo xitaa Apple TV.
Sida haddii waxaas oo dhammi aysan ku filnayn, iyo illaa inta Apple ka walaacsan tahay, laga soo bilaabo Valve iyaguna sidoo kale way ka faalloodaan waxaad isticmaali kartaa qalabka MFI-ga la xaqiijiyay (Loo Sameeyay iPhone | iPad | iPod). In kasta oo ay iyaguna faallo ka bixinayaan inay la jaan qaadi doonaan Steam Controller iyo qalabyada kale iyaga oo aan bixin faahfaahin dheeraad ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Guriga » Consolas » Barnaamij cusub oo Steam Link ah ayaa kuu oggolaanaya inaad ku ciyaartid ciyaaro moobilkaaga Android ama iPhone